SimFlow: GUI yeCFD OpenFOAM software | Linux Vakapindwa muropa
SimFlow: GUI yeCFD OpenFOAM software
Isaac | | Graphics, Zvirongwa, Resources
Mune zvimwe zvinyorwa ini ndanga ndambotaura nezve inonakidza OpenFOAM chirongwa, software inowanikwa yeLinux uye inobatsira kune avo vanoda CFD (Computational Fluid Dynamics) kuongorora kana computational fluid dynamics. Zvakanaka, ikozvino ini ndokuzivisawo iwe iyo SimFlow chirongwa ine zvakawanda zvine chekuita neOpenFOAM.
Sezvaunoziva, iyo CFD icho chinhu chinoshandiswa kune akawanda maseketi. Kubva pakuongorora kuti hutachiona hunogona sei kupararira nemumhepo kana mumwe munhu akosora kana kuhotsira, kusvika mukusimudzira ndege nendege dzemotokari, kuongororwa kwehunhu hwemvura mukati memapaipi, nezvimwe.
Zvakanaka, OpenFOAM inokutendera iwe kuti uwane iyo inodikanwa software yeaya ekufananidza uye kuverenga. Asi neSimFlow iwe unenge uine yakazara CFD software inowanikwa kune ese Windows neLinux. Nzira yekuwana ine simba uye inonzwisisika yemvura yekuongorora chishandiso neGUI.
SimFlow haisi yemahara kana yakavhurwa sosi software. Iyo mhinduro yekambani. Nekudaro, iwe uchave unokwanisa kuwana imwe shanduro yemahara zvachose zvimwe zvishoma. Iwe zvakare une rezinesi rekubhadhara rebhizimusi rine hunovandudzwa kugona. Kukanganisa kwaunowana mune yemahara vhezheni kunonyanya kutariswa pahuwandu hwemeshoni node dzinogona kushandiswa mukufananidza kana huwandu hwekupindirana kwesimba rekomputa raunogona kushandisa.
La yakabhadharwa Iyo ine muganho wakasarudzika, uye ndiko kuti inongogara chete gore rimwe chete nemubhadharo wega wega waunoita. Nekudaro, iyo yemahara vhezheni haina muganho mune izvo. Naizvozvo, unogona kuishandisa pese paunoda.
Iyo yazvino vhezheni, SimFlow 4.0 inowanikwa se 64-bit Linux package uye inotora ingangoita 137MB. Zvakare, iyi vhezheni inotsigira OpenFOAM kubva 4-6 uye 1612-1812. Ingori bhainari yaunokwereta ipa mvumo uye wozoimhanya sezvaungaita nechero imwe chirongwa ...
Mamwe ruzivo uye kurodha pasi kweSimFlow - Yepamutemo Webhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » SimFlow: GUI yeCFD OpenFOAM software
Deskreen inoshandura chero skrini kuva yechipiri uye inoshanda zvakakwana paLinux ine zero zvinetso
Iyo yakagadzikana vhezheni yeSublime Chinyorwa 4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo